Home Wararka Ergayga Qatar oo la kulmay Farmajo, Fahad & Rooble..
Waxaa magaalada Muqdisho ka bilowday kulamo uu dhinacyada siyaasadda la leeyahay ergeyga dowladda Qatar u so dirtay Soomaaliya.
Ergeyga dowladda Qatar Dr. Mutlaq Al-Qahtani ayaa Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya maanta kula kulmay Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Agaasimaha NISA Fahad Yaasiin.
Kulanka ayaa loga hadlay xaaladda cakiran ee dalka, arrimaha doorashooyinkooda iyo kaalinta ay dowladda Qatar ka qaadan karto fududeynta arrintan, iyadoo kulanku uu ahaa mid gaara ayaan wax war ah kasoo saarin Madaxtooyada.
Dr. Mutlaq Al-Qahtani ayaa sidoo kale kulan la yeeshay Ra’iisal wasaaraha xukuumada xilgaarsiinta, waxaana la filayaa inuu caawa Hotelka Decale kula kulmo xubnaha Midowga Musharixiinta.
Dhinaca kale Ergayga Dowladda Qatar ayaa kulamo kala gaara xalay la qaatay qaar ka mida wakiilada beesha Caalamka ee fadhigoodu yahay Muqdisho.
Kaalinta cusub ee dowladda Qatar dooneyso inay xaaladda Sooaaliya ku yeelato ayaan caddeyn, iyadoo afartii sano ee la soo dhaafay xiriir hoose la lahayd dowladii Farmaajo.